Mitokona rahampitso amin'ny 7 ora maraina ny mpiasa Kaiser: 40,000 mahery
Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Mitokona rahampitso amin'ny 7 ora maraina ny mpiasa Kaiser: 40,000 mahery
Mpiasa maherin'ny 40,000 avy amin'ny SEIU-UHW, OPEIU Local 29, ary IFPTE Local 20 no vonona hivoaka hanohana ireo injeniera, ka izany no fitokonana fiaraha-miory lehibe indrindra ao amin'ny firenena, hitakiana an'i Kaiser hampitsahatra ny fampijaliana ara-toekarena ary hanaiky ny fifanarahana ara-drariny miaraka amin'ny Injeniera operativa 39 eo an-toerana.
Hiala amin'ny asany ny mpiasa ary hiditra amin'ny fitokonana rahampitso amin'ny 7 ora maraina, Alakamisy 18 Novambra, ao amin'ny Kaiser Permanente Medical Center any San Jose sy any amin'ny tobim-pitsaboana isan-karazany manerana an'i Northern California.
Tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity, ireo mpiasan'ny fahasalamana misolo tena ny mpikambana Kaiser Permanente 36,000 ao amin'ny SEIU-UHW any Kalifornia Avaratra dia nifidy tamin'ny mari-pamantarana 97% mba hanomezana alalana ny fitokonana fiaraha-miory iray andro ho firaisankina amin'ireo injeniera Kaiser avy ao amin'ny Local 39 izay nitokona nandritra ny roa volana.
Ny asa voakasika amin'ny fifidianana fitokonana dia ahitana optometrists, mpahay siansa momba ny laboratoara klinika, teknisiana taovam-pisefoana sy x-ray, mpitsabo mpanampy manana fahazoan-dàlana, mpanampy mpitsabo manana mari-pahaizana, teknisianina mpandidy, teknisianina fivarotam-panafody, phlebotomista, mpanampy ara-pitsaboana ary mpikarakara trano, anisan'ny toerana an-jatony hafa.
Na dia fikambanana tsy mitady tombony aza - izay midika fa tsy mandoa hetra amin'ny fidiram-bolany sy ny hetra amin'ny fananana voafetra be - Kaiser Permanente dia nitatitra ny fidiram-bola mitentina $ 6.4 miliara tamin'ny taona 2020.
Ireo mpiasan'ny fahasalamana manao fanamiana dia hivoaka eo amin'ny fitokonana, hanao diabe, hanao kabary, hizara trakta amin'ny mpandalo, hihazona famantarana ary hitsoka kiririoka ho fanohanana ireo injeniera Kaiser avy amin'ny Local 39.
RAHAMPITSO 7 ora Alakamisy 18 Novambra
Hisy ihany koa ny fitokonana fiaraha-miory amin’ireto toerana ireto manomboka amin’ny 7 ora maraina ny 18 Novambra:
• SACRAMENTO ATSIMO: Kaiser Permanente South Sacramento Medical Center, 6600 Bruceville Road, Sacramento, CA 95823